एशियन लाइफको १ः०.६ अनुपातमा हकप्रद निष्कासन | गृहपृष्ठ
Home लगानी एशियन लाइफको १ः०.६ अनुपातमा हकप्रद निष्कासन
on: March 21, 2019 लगानी
एशियन लाइफको १ः०.६ अनुपातमा हकप्रद निष्कासन
चैत ७, काठमाडौं (अस) । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चैत २५ गतेदेखि १ बराबर शून्य दशमलव ६ अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गर्न लागेको छ । कम्पनीले प्रतिकत्ता रू. १ सयमा ७५ लाख ४० हजार ३ सय ५२ दशमलव ७३ कित्ता हकप्रद निष्कासन गर्न लागेको हो । कम्पनीको हकप्रदमा फागुन २१ गतेसम्म शेयर स्वामित्व भएका शेयरधनीहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । उक्त हकप्रदमा २०७६ साल वैशाख २९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिन्छ ।
कम्पनीको हकप्रद विक्री प्रबन्धकको काम एनआइबिएल एस क्यापिटल लिमिटेडले गरेको छ । आस्बा सदस्य सेवा लिएका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट अनलाइन आवेदन दिन सकिन्छ । कम्पनीको हाल चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब २५ करोड रहेको छ । हकप्रद बाँडफाँट पछि पूँजी रू. २ अर्ब १ करोड पुग्नेछ । कम्पनीलाई बीमा समितिले रू. अर्ब चुक्तापूँजी पु¥याउन निर्देशन दिएसँगै कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गरेको हो ।
कम्पनीकले यस वर्षको पुस मसान्तसम्म रू. २ करोड ८९ लाख २७ हजार खुद नाफा गरेको छ । नाफा गत वर्षभन्दा ११ दशमलव ८५ प्रतिशत बढी हो । यस अवधिमा कम्पनीले गत वर्षभन्दा ४१ दशमलव ७९ प्रतिशत बढी रू. १ अर्ब ७३ करोड ६१ लाख ३६ हजार बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ ।